Isuphamakethe - Etagtron, Inc.
Amasango ezokuphepha afakiwe emnyango wesitolo, inani lesango linqunywa ububanzi bendawo yokungena nohlobo lwesango.
Yimuphi umaki noma ilebula ozosetshenziswa ku-Supermarket?
Ehloboizingubo, Indwangu ekhanyayo efana nezingubo, iziketi, amasudi okudlala, isikibha, i-Etagtron inikezela ngethegi yokuphepha ngephinikhodi elifishane engu-16mm noma eyenziwe ngezifiso ukuze ivikelwe. Ikakhulukazi ngendwangu kasilika, kusetshenziswa ithegi ka-Etagtron ene-lanyard ngenkinobho, okungcono ukuvimbela umonakalo.
Amathiphu: Faka izikhonkwane ngezingubo bese uzifaka ngobumnene kumaki. Ungalokothi uphoqelele iphini kumathegi.
Ubusika izingubo, i-Etagtron nayo ingahlinzeka ngethegi yokuphepha ngophini omude noma umaki wenkomo eyenziwe ngezifiso wokuvikela i-Down.
I-Etagtron inikeza izinhlobo eziningana zamathegi ukuvikela izinhlobo zezicathulo.
I-Etagtron inikezela ngethegi lewayini lebhodlela lesayizi elihlukahlukene elihlukahlukene, ukuhlangabezana nezidingo zakho ezahlukahlukene.
Lapho ususa omaki, vele usebenzise i-magnetic remover.
Okokubhala Izimpahla Zezemidlalo
I-Etagtron ingahlinzeka ngamathegi wesicabucabu ahlukile futhi iphephile ukuvikela izimpahla ezibizayo.
Izikhwama nezinkambi kungokwenani eliphakeme lezimpahla, imvamisa zisebenzisa ama-alamu tag ukubona umphumela wokuvikela ongcono. I-Etagtron inikela ngezinhlobo eziningana zamathegi we-alamu entekenteke ukufanisa nezikhwama nokukhuthaza isithombe sakho somkhiqizo.
Ilebuli ye-RF iyisuti yokuhlafuna ushungamu, noma okunye kokudla okuncane, futhi singanikeza ilebula ngekhodi yedummy, akutholakali kalula, futhi sinelebuli ye-RF efriziwe 40 * 40mm yokudla okufriziwe.
Ungawasusa kanjani amathegi noma ungasebenzi amalebula?
Ngemuva kokukhokhelwa, ungasusa lokhu kuvikeleka kuma-athikili nge-detacher yethu noma i-deactivator.
Ubungako bensimbi noma i-deactivator bunqunywa ubuningi bedeski le-cashier.
Sebenzisa amandla okukhipha kazibuthe ukususa umaki wokhiye kazibuthe. Kwilebula, kune-deactivator ekuqondiseni kabusha.